British Airways Flights Kubva kuLondon Heathrow kuenda kuSanta Lucia Dzoka Mushure memakore Anopfuura Makumi makumi matatu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » British Airways Flights Kubva kuLondon Heathrow kuenda kuSanta Lucia Dzoka Mushure memakore Anopfuura Makumi makumi matatu
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
British Airways Vols Kubva kuLondon Heathrow Kudzokera kuSaint Lucia Mushure memakore Anopfuura Makumi makumi matatu
IU UK inowanzo musika wechipiri mukurusa wekushanya kuSanta Lucia.
TUI inopa sevhisi yevhiki nevhiki kuna Saint Lucia anobva kuLat's Gatwick.
British Airways ine ndege ina pavhiki kubva kuLondon kuGatwick kuenda kuSanta Lucia.
British Airways sevhisi kubva kuHeathrow ichapera munaGunyana 4, 2021.
Saint Lucia akawedzera rimwe gedhi kunzvimbo yekuenda nekudzoreredza sevhisi na British Airways kunze kweLondon Heathrow (LHR) mushure memakore anopfuura makumi matatu. Iyo Boeing 30 yakabata pasi neMugovera, Chikunguru 777, 24, kuma2021: 5pm ine huwandu hwese hwe45, mazhinji acho vashanyi.
Kunze kweGatwick (LGW), Saint Lucia inotogamuchira sevhisi sevhisi neTUI uye nendege ina pavhiki neBritish Airways. IUK inowanzo seSanta Lucia yechipiri-yakakura musika wekushanya uye kusvika parizvino, gore-kusvika-zuva rinoratidza kukura kwe4%.
Vashandi gumi nevatatu vakatungamirwa naCaptain -Peter Williams akabatana neVakuru veSaint Lucia Tourism Authority (SLTA) kuti vagamuchire chikwangwani chekurangarira chinoratidzira mapikicha mapatya, misika yematanho, uye mapakeji ekugamuchirwa anoshamisika. Vaviri vane rombo vafambi vakapiwawo chipo pakusvika.
“Iyi sevhisi ichangotangwa svondo nevhiki kubva Heathrow inouya panguva inokodzera apo Saint Lucia iri kurira nyangwe kutsigira kwakawanda kwezhizha ratonakidza, uye iri kuuya yepamusoro mwaka wechando. Izvi zvinoratidzawo kufambira mberi kwekuti chikamu chekushanya chizadzikiswe, ”akadaro Public Relations Manager- Geraine Georges.
Iyo British Airways sevhisi kubva kuHeathrow ichaguma muna Gunyana 4, 2021, uye nhaurirano dzave kutoenderera mberi kuti dzizotangazve munguva pfupi iri kutevera. Ndege iyi yakarongerwa kuwedzera kusimudzira nendege munguva yechando pamwe nendege dzezuva nezuva kubva muna Mbudzi kubva kuGatwick (LGW).